မကြာမကြာ အကြောဆေးသွင်းဖြစ်နေသူများအတွက် သတိပြုဖွယ် - Latest Myanmar News
July 7, 2020 Latest Myanmar News ကျန်းမာရေးသုတ 0
ကိုထွန်းကျော်။ ကုန်ထမ်းရတာ များသွားလို့ထင်သည်။ ညောင်းကိုက်သည်။ ပိုဆိုးသည်မှာ ကိုယ်လက်တွေ မသယ်ချင်လောက်အောင်ဖြစ်နေသည်။
လှုပ်ရှားရတာ အားနည်းသလို ဖြစ်နေတာ ၃-၄ ရက်ရှိပြီ။ အရင်က အလုပ်ပြန်လျှင်ပုံမှန်သောက်နေကျ အရက်လေး ၁ ပုလင်းလောက်သောက်လျှင် ပင်ပန်းတာ သက်သာသလို ဖြစ်သော်လည်း အားနည်းတာက အခုရက်ပိုင်း မသက်သာ။
ညနေတော့ အရက်မသောက်သေးဘဲ သူငယ်ချင်းညွှန်းသလို လမ်းထိပ်က ဆေးခန်းမှာ အကြောဆေး ၀င်သွင်းဦးမည်။
အိမ်ရောက်တာနဲ့ကိုထွန်းကျော်ဝင်အိပ်ဖြစ်သည်။ အကြောအားဆေးဝင်သွင်းလိုက်သော်လည်း သူများတွေပြောသလိုလန်းမသွား။ နောက်နေ့မနက်ထတော့ကိုထွန်းကျော်ခြေထောက်တွေ မလှုပ်နိုင်တော့။
လက်ကိုအားပြု ထမည်ကျန်တော့လည်း လက်ပါ ကောင်းကောင်းမလှုပ်နိုင်တော့။ သို့နှင့် ကိုထွန်းကျော်တစ်ယောက်အင်းစိန်ဆေးရုံရောက်လာသည်။
ဆရာဝန်တွေကတော့ ပိုတက်စီယမ် (potassium) ခေါ် သက်စောင့်ဓာတ်နည်းတာလို့ပြောသည်။ ဒီထက်နည်းလာရင်အသက်ရှူမရဖြစ်လာ၊ နှလုံးရပ်ပြီးသေတဲ့အထိဖြစ်လာနိုင်မည်ဟုပြောသည်။
ပြီးတော့အကြောဆေးသွင်းလိုက်သေးလားဟု ပါရဂူကြီးကမေးသေးသည်။ သွင်းမိသည်လို့ဖြေတော့နောက်ဆိုဆင်ခြင်ဖို့ပြောသည်။ ပိုတက်စီယမ် နည်းနေချိန် အကြောဆေးသွင်းမိရင်ပိုနည်းသွားတတ်သည်တဲ့။
ဒေါ်အေးမူတစ်ယောက်နေရထိုင်ရ မကောင်းဖြစ်နေသည်မှာ လနှင့်ချီနေပြီဖြစ်သည်။ နုံးလွယ် ပင်ပန်းလွယ်သည်။ ရေမကြာမကြာငတ်သည်။ ခြေထောက်တွေ ထုံသလိုကျင်သလိုဖြစ်နေသည်။
လမ်းထိပ်က ဆေးခန်းမှာ တော့အကြောဆေးသွား သွားသွင်းဖြစ်သည်။ ဝေဒနာကတော့သိပ်မသက်သာလှ။
တစ်ရက်ဒေါ်အေးမူရုတ်တရက်မူးလဲသည်။ ချွေးစေးတွေလည်းပြန်လာသည်။ သတိတော့အကြာကြီးလစ်မသွား။ မောသည်မောသည်ဆို၍ မြောက်ဥက္ကလာပဆေးရုံပို့လိုက်ကြသည်။ နှလုံးသွေးကြောပိတ်သည်ဟု ပြောသည်။
ဆီးချိုလည်း အရမ်းတက်နေသည်။ ဆရာဝန်မေးသော ဆီးချို လက္ခဏာတွေက ဒေါ်အေးမူအရင်ဖြစ်နေသည့်အတိုင်း ဆင်တူနေသည်။ ဆီးချိုတက်လို့ ဖြစ်နေသည့်လက္ခဏာတွေကို ဂလူးကို့စ်အကြောဆေးတွေ ထိုးနေတော့ပိုဆိုးသွားကြောင်း ပါရဂူကြီးကရှင်းပြသည်။
ဆေးခန်းတွင်အကြောဆေးသွင်းချင်လို့ပါဆိုပြီး လာသောလူနာမျိုးကို ဆေးခန်းထိုင်သော ဆရာဝန်တိုင်း တွေ့ဖူးကြပါသည်။ အကြောအားဆေးတွင်များသောအားဖြင့်ဂလူးကို့စ်(glucose) နှင့် ဗီတာမင်ဓာတ်များ (vitamin B2, B6, B12 etc.) ထည့်သွင်းထိုးလေ့ရှိသည်။
ဂလူးကို့စ်သည်အချိုဓာတ်ဖြစ်သည်။ အချိုဓာတ်သွေးထဲရောက်လာလျှင်ဦးနှောက်နှင့်တခြားကိုယ်အင်္ဂါ အစိတ်အပိုင်းများသို့ ဆက်ရောက်သွားသည်။ ထိုအခါ လူကလန်းဆန်းသွားသလို ခံစားရသည်။
ပါဝင်သော ဗီတာမင်ဓာတ်များ ကြောင့်လည်း အားပိုရှိသွားသည်ဟုထင်ကြသည်။ ထို့ကြောင့်လည်း အကြောအားဆေးသွင်းလျှင် အားရှိသွားသည်နေလို့ကောင်းသွားသည်ဟု ခံစားသွားကြရခြင်းဖြစ်သည်။
သို့သော်တကယ်တမ်း သိပ္ပံနည်းကျ တွက်ကြည့်လျှင်ရေရှည်အတွက် အာနိသင်သိပ်မထူးလှသည်ကိုတေတွ့ရှိကြရမည်။ အကြောဆေးတစ်ခါသွင်းစာ ဂလူးကို့စ်တစ်လုံးတွင်၅ သို့ ၁၀ ဂရမ်သာ ပါလေ့ရှိသည်။
ကီလိုကယ်လိုရီဆိုသော ယူနစ်နှင့်တွက်လျှင်၁၀ ဂရမ်တွင်မှ၄၀ ကီလိုကယ်လိုရီသာ ရပါသည်။ ထမင်းတစ်ခါစားပြင်သလောက်သည်၃၀၀ ကီလိုကယ်လိုရီခန့်ရသည်။
လူတစ်ယောက်အတွက်တစ်နေ့တာလိုအပ်ချက်သည် အကြမ်းအားဖြင့်၂၀၀၀ ကီလိုကယ်လိုရီလိုသည်။ ထိုပမာဏကိုထမင်းအပြင် အဆီဓာတ်နှင့်အသားတို့မှရသည်။ ထိုကြောင့်အကြောထိုးဆေးမှရသော ကီလိုကယ်လိုရီသည်တစ်နေ့တာ လိုအပ်ချက်နှင့်ယှဉ်လျှင်ဘာမှမဟုတ်သည်ကို တွေ့နိုင်ပါသည်။
ပုလင်းကြီးတစ်လုံး (၁၀ % ဂလူးကို့) တွင်ပင် ဂလူးကို့စ်၅၀ ဂရမ်သာ ပါရာ ၂၀၀ ကီလိုကယ်လိုရီသာ ရပေလိမ့်မည်။ အကြောဆေး ဂလူးကို့စ်သည်အဓိကအားဖြင့်သွေးတွင်း အချိုဓာတ်ကျနေသောလူများတွင် အဓိကသုံးကြခြင်းဖြစ်သည်။
အကြောဆေးတွင်ပါသော ဗီတာမင်ဓာတ်များသည်လည်း သွေးကြောထဲ တိုက်ရိုက်ရောက်သွားသည့် အတွက်မြန်မြန်အာနိသင်ရှိနိုင်သည်မှာ မှန်သော်လည်း ပုံမှန်စားသောက်နိုင်သူတစ်ယောက်အတွက် ထိုးရလောက်အောင်မလိုပါ။
အစားအသောက်တွင်ပါသလောက်နှင့်လုံလောက်နိုင်သလို လိုအပ်ပါက အားဆေးသောက်လျှင်လည်း လုံလောက်နိုင်ပါသည်။ ထို့ပြင် သွေးပေါင်ကျနေလျှင်လည်း ဂလူးကို့စ် အကြောဆေးသွင်းရုံနှင့်သွေးပေါင်ပြန်မတက်နိုင်ပါ။
ထို့ကြောင့်ပုံမှန်စားနိုင်သောက်နိုင်သူတစ်ယောက်အတွက် သီးသန့်အကြောဆေးသွင်းရန် မလိုအပ်ပါ။ အကြောဆေးသွင်းရန်လိုနေပြီဟုထင်နေကြသော နုံးခြင်း၊ အားမရှိခြင်းစသည့်လက္ခဏာ များသည်လည်း အပေါ်တွင်ပြောခဲ့သလို ပိုတက်စီယမ်နည်းခြင်း၊ ဆီးချိုဖြစ်ခြင်း စသည့်ရောဂါတစ်ခုခု၏ လက္ခဏာများဖြစ်နေတတ်သည်။
ထိုအခါမျိုးတွင်ဂလူးကိုိ့စ်အကြောဆေးသွင်းလိုက်မှ ပိုဆိုးသွားတတ်သည်။ တခြားဘာရောဂါမျှမရှိလျှင်လည်း အကြောဆေးတွင်ပါသော ဓာတ်တစ်ခုခုကိုမတည့်ခြင်း ဖြစ်နိုင်ပါသေးသည်။
ဆေးခန်းထိုင်ကြသော ဆရာဝန်များကြုံတွေ့နေကြရသော အခက်အခဲမှာ အကြောဆေးသွင်းလို၍ လာသောလူနာများတွင်ဖော်ပြပါရောဂါလက္ခဏာတစ်စုံတစ်ခု သံသယရှိ၍ ထပ်မံစစ်ဆေးလိုသည့်အခါ လူနာဘက်က အကြောဆေးသွင်းဖို့သာ အာရုံထားကြပြီး ဘာမှထပ်မစစ်ချင်ကြခြင်းပင်။
ဆရာဝန်က အကြောဆေးမသွင်းသင့်ဟု ရှင်းပြလိုက်လျှင်ပင်အကြောဆေးသွင်းပေးသော ရမ်းကုထံ ရောက်သွားတတ်သည်။ အကြောဆေးသွင်းခြင်းကို များစွာအကျိုးရှိသည်ဟုထင်ကြခြင်းကြောင့်ပင်ဖြစ်သည်။ ထိုကြောင့်လည်း ယခုစာစုကို ရေးသားတင်ပြရခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
မလိုအပ်ဘဲ အကြောဆေးမသွင်းကြရန်နှင့် ဆရာဝန်မှအကြောဆေးသွင်းရန် မသင့်တော်ကြောင်းရှင်းပြသည့်အခါ လက်ခံပြီး တခြားရောဂါများကို ဆက်ရှာရန် လိုအပ်လာပါက ဆက်လက်စစ်ဆေးမှုခံယူရန် အထူးအရေးကြီးကြောင်း တင်ပြလိုက်ပါသည်။
ကိုထှနျးကြျော။ ကုနျထမျးရတာ မြားသှားလို့ထငျသညျ။ ညောငျးကိုကျသညျ။ ပိုဆိုးသညျမှာ ကိုယျလကျတှေ မသယျခငျြလောကျအောငျဖွဈနသေညျ။
လှုပျရှားရတာ အားနညျးသလို ဖွဈနတော ၃-၄ ရကျရှိပွီ။ အရငျက အလုပျပွနျလြှငျပုံမှနျသောကျနကြေ အရကျလေး ၁ ပုလငျးလောကျသောကျလြှငျ ပငျပနျးတာ သကျသာသလို ဖွဈသျောလညျး အားနညျးတာက အခုရကျပိုငျး မသကျသာ။
ညနတေော့ အရကျမသောကျသေးဘဲ သူငယျခငျြးညှနျးသလို လမျးထိပျက ဆေးခနျးမှာ အကွောဆေး ၀ငျသှငျးဦးမညျ။
အိမျရောကျတာနဲ့ကိုထှနျးကြျောဝငျအိပျဖွဈသညျ။ အကွောအားဆေးဝငျသှငျးလိုကျသျောလညျး သူမြားတှေပွောသလိုလနျးမသှား။ နောကျနမေ့နကျထတော့ကိုထှနျးကြျောခွထေောကျတှေ မလှုပျနိုငျတော့။
လကျကိုအားပွု ထမညျကနျြတော့လညျး လကျပါ ကောငျးကောငျးမလှုပျနိုငျတော့။ သို့နှငျ့ ကိုထှနျးကြျောတဈယောကျအငျးစိနျဆေးရုံရောကျလာသညျ။
ဆရာဝနျတှကေတော့ ပိုတကျစီယမျ (potassium) ချေါ သကျစောငျ့ဓာတျနညျးတာလို့ပွောသညျ။ ဒီထကျနညျးလာရငျအသကျရှူမရဖွဈလာ၊ နှလုံးရပျပွီးသတေဲ့အထိဖွဈလာနိုငျမညျဟုပွောသညျ။
ပွီးတော့အကွောဆေးသှငျးလိုကျသေးလားဟု ပါရဂူကွီးကမေးသေးသညျ။ သှငျးမိသညျလို့ဖွတေော့နောကျဆိုဆငျခွငျဖို့ပွောသညျ။ ပိုတကျစီယမျ နညျးနခြေိနျ အကွောဆေးသှငျးမိရငျပိုနညျးသှားတတျသညျတဲ့။
ဒျေါအေးမူတဈယောကျနရေထိုငျရ မကောငျးဖွဈနသေညျမှာ လနှငျ့ခြီနပွေီဖွဈသညျ။ နုံးလှယျ ပငျပနျးလှယျသညျ။ ရမေကွာမကွာငတျသညျ။ ခွထေောကျတှေ ထုံသလိုကငျြသလိုဖွဈနသေညျ။
လမျးထိပျက ဆေးခနျးမှာ တော့အကွောဆေးသှား သှားသှငျးဖွဈသညျ။ ဝဒေနာကတော့သိပျမသကျသာလှ။
တဈရကျဒျေါအေးမူရုတျတရကျမူးလဲသညျ။ ခြှေးစေးတှလေညျးပွနျလာသညျ။ သတိတော့အကွာကွီးလဈမသှား။ မောသညျမောသညျဆို၍ မွောကျဥက်ကလာပဆေးရုံပို့လိုကျကွသညျ။ နှလုံးသှေးကွောပိတျသညျဟု ပွောသညျ။
ဆီးခြိုလညျး အရမျးတကျနသေညျ။ ဆရာဝနျမေးသော ဆီးခြို လက်ခဏာတှကေ ဒျေါအေးမူအရငျဖွဈနသေညျ့အတိုငျး ဆငျတူနသေညျ။ ဆီးခြိုတကျလို့ ဖွဈနသေညျ့လက်ခဏာတှေကို ဂလူးကို့ဈအကွောဆေးတှေ ထိုးနတေော့ပိုဆိုးသှားကွောငျး ပါရဂူကွီးကရှငျးပွသညျ။
ဆေးခနျးတှငျအကွောဆေးသှငျးခငျြလို့ပါဆိုပွီး လာသောလူနာမြိုးကို ဆေးခနျးထိုငျသော ဆရာဝနျတိုငျး တှဖေူ့းကွပါသညျ။ အကွောအားဆေးတှငျမြားသောအားဖွငျ့ဂလူးကို့ဈ(glucose) နှငျ့ ဗီတာမငျဓာတျမြား (vitamin B2, B6, B12 etc.) ထညျ့သှငျးထိုးလရှေိ့သညျ။
ဂလူးကို့ဈသညျအခြိုဓာတျဖွဈသညျ။ အခြိုဓာတျသှေးထဲရောကျလာလြှငျဦးနှောကျနှငျ့တခွားကိုယျအင်ျဂါ အစိတျအပိုငျးမြားသို့ ဆကျရောကျသှားသညျ။ ထိုအခါ လူကလနျးဆနျးသှားသလို ခံစားရသညျ။
ပါဝငျသော ဗီတာမငျဓာတျမြား ကွောငျ့လညျး အားပိုရှိသှားသညျဟုထငျကွသညျ။ ထို့ကွောငျ့လညျး အကွောအားဆေးသှငျးလြှငျ အားရှိသှားသညျနလေို့ကောငျးသှားသညျဟု ခံစားသှားကွရခွငျးဖွဈသညျ။
သို့သျောတကယျတမျး သိပ်ပံနညျးကြ တှကျကွညျ့လြှငျရရှေညျအတှကျ အာနိသငျသိပျမထူးလှသညျကိုတတှေ့ရှိကွရမညျ။ အကွောဆေးတဈခါသှငျးစာ ဂလူးကို့ဈတဈလုံးတှငျ၅ သို့ ၁၀ ဂရမျသာ ပါလရှေိ့သညျ။
ကီလိုကယျလိုရီဆိုသော ယူနဈနှငျ့တှကျလြှငျ၁၀ ဂရမျတှငျမှ၄၀ ကီလိုကယျလိုရီသာ ရပါသညျ။ ထမငျးတဈခါစားပွငျသလောကျသညျ၃၀၀ ကီလိုကယျလိုရီခနျ့ရသညျ။
လူတဈယောကျအတှကျတဈနတေ့ာလိုအပျခကျြသညျ အကွမျးအားဖွငျ့၂၀၀၀ ကီလိုကယျလိုရီလိုသညျ။ ထိုပမာဏကိုထမငျးအပွငျ အဆီဓာတျနှငျ့အသားတို့မှရသညျ။ ထိုကွောငျ့အကွောထိုးဆေးမှရသော ကီလိုကယျလိုရီသညျတဈနတေ့ာ လိုအပျခကျြနှငျ့ယှဉျလြှငျဘာမှမဟုတျသညျကို တှနေို့ငျပါသညျ။
ပုလငျးကွီးတဈလုံး (၁၀ % ဂလူးကို့) တှငျပငျ ဂလူးကို့ဈ၅၀ ဂရမျသာ ပါရာ ၂၀၀ ကီလိုကယျလိုရီသာ ရပလေိမျ့မညျ။ အကွောဆေး ဂလူးကို့ဈသညျအဓိကအားဖွငျ့သှေးတှငျး အခြိုဓာတျကနြသေောလူမြားတှငျ အဓိကသုံးကွခွငျးဖွဈသညျ။
အကွောဆေးတှငျပါသော ဗီတာမငျဓာတျမြားသညျလညျး သှေးကွောထဲ တိုကျရိုကျရောကျသှားသညျ့ အတှကျမွနျမွနျအာနိသငျရှိနိုငျသညျမှာ မှနျသျောလညျး ပုံမှနျစားသောကျနိုငျသူတဈယောကျအတှကျ ထိုးရလောကျအောငျမလိုပါ။
အစားအသောကျတှငျပါသလောကျနှငျ့လုံလောကျနိုငျသလို လိုအပျပါက အားဆေးသောကျလြှငျလညျး လုံလောကျနိုငျပါသညျ။ ထို့ပွငျ သှေးပေါငျကနြလြှေငျလညျး ဂလူးကို့ဈ အကွောဆေးသှငျးရုံနှငျ့သှေးပေါငျပွနျမတကျနိုငျပါ။
ထို့ကွောငျ့ပုံမှနျစားနိုငျသောကျနိုငျသူတဈယောကျအတှကျ သီးသနျ့အကွောဆေးသှငျးရနျ မလိုအပျပါ။ အကွောဆေးသှငျးရနျလိုနပွေီဟုထငျနကွေသော နုံးခွငျး၊ အားမရှိခွငျးစသညျ့လက်ခဏာ မြားသညျလညျး အပျေါတှငျပွောခဲ့သလို ပိုတကျစီယမျနညျးခွငျး၊ ဆီးခြိုဖွဈခွငျး စသညျ့ရောဂါတဈခုခု၏ လက်ခဏာမြားဖွဈနတေတျသညျ။
ထိုအခါမြိုးတှငျဂလူးကို့ဈအကွောဆေးသှငျးလိုကျမှ ပိုဆိုးသှားတတျသညျ။ တခွားဘာရောဂါမြှမရှိလြှငျလညျး အကွောဆေးတှငျပါသော ဓာတျတဈခုခုကိုမတညျ့ခွငျး ဖွဈနိုငျပါသေးသညျ။
ဆေးခနျးထိုငျကွသော ဆရာဝနျမြားကွုံတှနေ့ကွေရသော အခကျအခဲမှာ အကွောဆေးသှငျးလို၍ လာသောလူနာမြားတှငျဖျောပွပါရောဂါလက်ခဏာတဈစုံတဈခု သံသယရှိ၍ ထပျမံစဈဆေးလိုသညျ့အခါ လူနာဘကျက အကွောဆေးသှငျးဖို့သာ အာရုံထားကွပွီး ဘာမှထပျမစဈခငျြကွခွငျးပငျ။
ဆရာဝနျက အကွောဆေးမသှငျးသငျ့ဟု ရှငျးပွလိုကျလြှငျပငျအကွောဆေးသှငျးပေးသော ရမျးကုထံ ရောကျသှားတတျသညျ။ အကွောဆေးသှငျးခွငျးကို မြားစှာအကြိုးရှိသညျဟုထငျကွခွငျးကွောငျ့ပငျဖွဈသညျ။ ထိုကွောငျ့လညျး ယခုစာစုကို ရေးသားတငျပွရခွငျး ဖွဈပါသညျ။
မလိုအပျဘဲ အကွောဆေးမသှငျးကွရနျနှငျ့ ဆရာဝနျမှအကွောဆေးသှငျးရနျ မသငျ့တျောကွောငျးရှငျးပွသညျ့အခါ လကျခံပွီး တခွားရောဂါမြားကို ဆကျရှာရနျ လိုအပျလာပါက ဆကျလကျစဈဆေးမှုခံယူရနျ အထူးအရေးကွီးကွောငျး တငျပွလိုကျပါသညျ။